महँगो डलर, सस्तो रूपैयाँ :: मुक्ति अर्याल :: Setopati
मुक्ति अर्याल काठमाडौं, पुस ५
सन् १९९३ देखि नेपाली रूपैयाँ भारतीय रूपैयाँको दाँजोमा घटबढ हुँदैन। बजार उथलपुथल हुँदा पनि सय भारू बराबर १ सय ६० रूपैयाँमै स्थिर रहन्छ। यसको अर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय तवरमा नेपालको स्वतन्त्र मौद्रिक नीति छैन। नेपाली रूपैयाँको मूल्य भारतीय रूपैयाँ र अर्थतन्त्रमा भर पर्छ। जबकि, भारतीय रुपयाँको दर खुलाबजारले तय गर्छ। अन्य विदेशी मुद्राको दाँजोमा भारू घटबढ हुँदा नेपाली रूपैयाँ पनि त्यसैलाई पछ्याउँदै तलमाथि गर्न थाल्छ।
यस वर्ष अमेरिकी डलर प्राय: सबै विदेशी मुद्राको तुलनामा बलियो हुँदै गयो। बलियो अमेरिकी डलर कसैको चाहना होइन। अमेरिका आफैं पनि बलियो अमेरिकी डलर चाहँदैन। बलियो डलरले आफ्नो आर्थिक हित गर्छ भन्ने परम्परागत अवधारणामा अमेरिका आफैं विश्वास गर्दैन। तै उसको मुद्रा बलियो हुँदै गइरहेको छ। यसको कारण, उसको चाहनाभन्दा अमेरिकी अर्थतन्त्र नै बलियो हुँदै जानु हो।
यस अवधिमा नेपाली र भारतीय मुद्रा अमेरिकी डलरको दाँजोमा १३% भन्दा बढी सस्तिएका छन्। चीन, सिंगापुर, ताइवान, थाइल्यान्ड, मलेसिया, इन्डोनेसियाजस्ता उदीयमान अर्थतन्त्रको हालत पनि यही छ।
यो सन्दर्भमा नेपाली रूपैयाँ अमेरिकी डलरको तुलनामा किन यति सस्तो भयो भन्ने हाम्रो चासोको विषय हो। यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा के असर पार्छ? यसका फाइदा/बेफाइदा के छन्? यो अवस्थामा कहिले र कसरी सुधार हुन्छ?
भारू कमजोर हुनुमा तीन प्रमुख कारण छन्:
पहिलो, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चातेलको मूल्यवृद्धि र भारतको कच्चातेल आयात हो। हाल कच्चातेलको मूल्य प्रतिब्यारेल ५० अमेरिकी डलर हाराहारी छ। गत जुन/अगस्टमा यो बढेर ७४ अमेरिकी डलर नाघेको थियो। कच्चा तेलको उत्पादन खाडी मुलुकहरू, भेनेजुएला, रसिया, अमेरिका लगायत देशमा भए पनि यसको मूल्य अमेरिकी डलरमा कायम हुन्छ। जब तेलको मूल्य घटबढ हुन्छ, यसको सिधा असर आयातकर्ता देशको अर्थतन्त्र र मुद्रामा पर्छ।
भारत विश्वको तेश्रो ठूलो तेल आयातकर्ता हो। उसले आफ्नो खपतको ८०% तेल बाहिरबाट आयात गर्छ। यसमा नेपालको तेल आयात पनि संलग्न छ। उसले आफ्नो आयातको ६०% तेल इरानबाट मात्रै ल्याउँछ। इरानबाट ल्याउने तेलको भुक्तानी भारतीय रूपैयाँमा हुन्छ भने बाँकी अमेरिकी डलरमा।
समग्रमा भारतीय अर्थतन्त्र राम्रो भए पनि यसका केही पक्ष कमजोर छन्। सबभन्दा कमजोर पक्ष निर्यात हो। यो आयातको तुलनामा धेरै कम छ। भारतको वैदेशिक व्यापार घाटामा छ। यो फराकिलो र बढ्दो छ। यस वर्ष आयात र निर्यातबीचको फरक कुल अर्थतन्त्रको २.४% छ। जुन ४ वर्षमा सबभन्दा उच्च हो। कच्चा तेलको मूल्यमा भएको २५% वृद्धिले यो घाटा बढाएको हो। आयातको भुक्तानीका लागि भारतमा अमेरिकी डलरको माग बढेर गएको छ। यसले विदेशी मुद्राको सञ्चय घट्दो छ। यो भारतका लागि ठूलो चिन्ताको विषय हो।
भारतले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सकेको छैन। यसले पनि भारतीय रूपैयाँ कमजोर भएको हो। भारतको वार्षिक मूल्य वृद्धिदर ६% भन्दा माथि छ। यो अमेरिकी र विश्वको औसत मूल्यवृद्धि दरभन्दा क्रमश: ४% र ३% बढी हो।
अर्को कारण, रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाले भारतका वाणिज्य बैंकहरूलाई दिने ऋणको ब्याजदर (रिपोरेट) हो। विदेशी मुद्राको पलायन रोक्न र विदेशी मुद्रा आकर्षित गर्न रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाले यस्तो ब्याजदर त्रैमासिक रूपमा २५ आधारविन्दुका दरले बढाउन सक्ने आकलन गरिएको थियो। हाललाई यो दर ६.५% मै स्थिर राखिएको छ। यस्तो ब्याजदर बढाएर मात्र भारतीय मुद्राको अवमूल्यन रोक्न सम्भव देखिँदैन।
भारतको आर्थिक वृद्धिदर ७% भन्दा माथि हुँदा पनि मूल्यवृद्धि रोक्न, निर्यात बढाउन र रोजगारी बढाउन पर्याप्त भइरहेको छैन। भारत सरकारले पाँच सय र हजार दरका नोट चलनचल्तीबाट हटाएपछि भारतीय रूपैयाँप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास कम भएको छ। भारतीय रूपैयाँ सञ्चित गर्न ठूलो मात्रामा बहुराष्ट्रिय कम्पनी तथा विदेशी राष्ट्रहरू उत्सुक छैनन्।
भारतको पुँजीगत खाता (प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र पुँजी बजारमा लगानी) मा कमी आउनु पनि अमेरिकी डलर बलियो हुनुको अर्को कारण हो।
अमेरिकी अर्थतन्त्र बलियो हुँदा उसको मुद्रा बलियो हुन्छ, अरू देशका मुद्रा कमजोर। हालका दिनमा अमेरिकी अर्थतन्त्र ४% हाराहारी वृद्धि भइरहेको छ। यो विगत १६ वर्षकै उच्च हो। अमेरिकी डलर अन्य मुद्राको दाँजोमा बलियो हुनुमा उसको बलियो अर्थतन्त्र र उत्साहजनक आर्थिक वृद्धिदर नै हो।
अमेरिकी केन्द्रीय बैंक 'फेडरल रिजर्भ बोर्ड' को नीतिगत ब्याजदर 'फेडरल फन्ड्स रेट' बढाउने नीतिले पनि अमेरिकी सरकारको ऋणपत्र अमेरिकी र विदेशी लगानीकर्ताका लागि आकर्षक भएको छ। अमेरिकी सरकारको उद्योग/व्यवसायलाई व्यापक कर छुट दिने नीतिले त्यहाँ पुँजीगत लागानी आकर्षक छ। यसले अमेरिकी डलरको माग बढ्दो छ।
विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चलनचल्तीमा रहेका १८५ मुद्रामध्ये अमेरिकी डलरलाई प्राय: सबै देशले सञ्चिति मुद्राका रूपमा प्रयोग गर्छन्। विश्वमा ६४% ले अमेरिकी डलरलाई सञ्चिति मुद्राका रूपमा राख्छन् भने युरोलाई १९.९% ले। कुल निष्काशित अमेरिकी डलरको ६५% रकम अमेरिका बाहिरका देशमा प्रयोग हुन्छ। विश्व व्यापारको ८५% भुक्तानी अमेरिकी डलरमा हुन्छ। प्रयोगका हिसाबले पनि अमेरिकी डलर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राका रूपमा सर्वस्वीकार्य र बलियो छ।
गत वर्ष नेपालको आयात लगभग १२ खर्ब र निर्यात ८५ अर्ब रूपैयाँ थियो। निर्यातभन्दा आयात १२/१४ गुणा धेरै छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा आयात ३ खर्ब ७३ अर्ब, निर्यात २३ अर्ब ७४ करोड र चालु खातामा घाटा ३ खर्ब ४९ अर्ब २६ करोड छ। ३ खर्ब १४ अर्ब रेमिट्यान्स आएका कारण शोधनान्तर घाटा ३५ अर्ब २६ करोड भएको छ।
विदेशी मुद्रा (अमेरिकी डलर) मा वैदेशिक ऋण लिने वाणिज्य बैंक, कम्पनी, संघ/संस्थालाई साँवा र ब्याज भुक्तानीको दायित्व बढ्छ र नोक्सान हुन्छ। यस्ता संस्थाले आजको दरमा ऋण चुक्ता गर्दा लिएकोभन्दा धेरै साँवा/ब्याज फिर्ता गर्नुपर्छ। अमेरिकी डलरमा विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) भएका विद्युत आयोजनाबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपर्छ। नेपालमा लगानी गरेका विदेशी लगानीकर्ताले अमेरिकी डलरमा विदेश लाने मुनाफामा कमी आउनेछ।
नेपाली पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्ने उद्यमी र व्यवसायी पनि महँगो अमेरिकी डलरबाट लाभान्वित हुन्छन्। नेपाली मुद्रा सस्तो हुँदा नेपाल भ्रमण गर्ने पर्यटक (भारत बाहेकका) लाई भ्रमण र बसाइ सस्तो पर्छ। पर्यटकहरू पहिलेको तुलनामा थोरै पैसामा नेपाल भ्रमण गर्न सक्छन्। यसले विदेशी पर्यटकको संख्या र बसाइ बढाउन मद्दत गर्छ। आफ्नो सेवा र सुविधाको भुक्तानी अमेरिकी डलरमा लिने पर्यटन व्यवसायीलाई पनि महँगो डलरको सिधा र तत्काल फाइदा हुन्छ। नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ताको लागि खरिद (श्रम, साधन, कच्चापदार्थ, जमिन) सस्तो पर्छ।
कहिले हुन्छ सुधार?
सबभन्दा पहिला तेल निर्यातक राष्ट्रको संगठन 'ओपेक' ले कच्चा तेलको उत्पादन बढाएर आपूर्तिमा सुधार आए तेलको मूल्य कम हुनेछ। इरान र भेनेजुएलामाथिको अमेरिकी प्रतिबन्ध हटेर तेल आपूर्ति सहज भए पनि मूल्यमा सुधार आउनेछ। जाडो याममा यसै पनि तेलको माग कम हुन्छ। यसले पनि तेलको मूल्य घटाउन केही सहयोग गर्छ।
रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाले आफ्नो मौद्रिक नीतिमा केही सुधारका कदम लिनसक्छ। उसले त्रैमासिक रूपमा रिपोरेट बढाए भारतीय सरकारी बन्ड आकर्षक हुन गई थप विदेशी लगानी आउने र विदेशी मुद्रा/लगानी भारतबाट बाहिर जाने प्रक्रिया रोकिन सक्छ। यसले भारतमा अमेरिकी डलरको सञ्चय बढ्न गई भारतीय रूपैयाँको अवमूल्यन रोकिन सक्छ। रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाले मूल्य वृद्धिदर (जुन गत अगस्टमा ४% भन्दा कम थियो) घटाएर ४ भन्दा कममा राख्न र आर्थिक वृद्धिदर बढाउन सके पनि विनिमय दर सुधारिन सक्छ। मूल्य वृद्धिदर कम गर्न उसले रिपोरेट बढाउन सक्छ। तर यसले उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न गाह्रो पार्छ।
अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध अन्त भएर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सामान्य अवस्थामा फर्के पनि मुद्राहरूबीचको विनिमय दरको असामान्य घटबढ सामान्य अवस्थामा फर्कन सक्छ।
कच्चा तेल, अन्य वस्तुको आयात/निर्यात र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा अमेरिकी डलरबाहेक अन्य मुद्राको प्रयोग बढे डलरको माग कम भई डलरको मूल्य अत्यधिक बढ्ने क्रम रोकिन सक्छ। यसले भारतीय लगायत अन्य मुद्राहरू अत्यधिक अवमूल्यन हुनबाट रोकिनेछन्।
दोस्रो उपाय, भारतीय रुपैयासँग हाल कायम विनिमय दर पुनरावलोकन गर्ने हो। यसमा हाल १.६ मा स्थिर रहेको विनिमय दर आवश्यकताअनुसार घटाएर १.०० वा १.३० मा ल्याउने (वा बढाएर २.०० मा लैजाने) वा अर्को कुनै उपयुक्त दरमा स्थिर राख्ने वा कुनै एक सीमा (जस्तै १.३० देखि १.६० बिच) मा चलायमान रहन दिने गर्न सकिन्छ।
पहिलो कदम सबभन्दा उत्तम उपाय हो। तर, आयात कम गर्न र निर्यात बढाउन ठूलो संघर्ष गर्नुपर्छ, जुन धेरै कठिन छ। तर सम्भव छ। पछिल्ला दुई उपायका राम्रा/नराम्रा दुवै पक्ष छन्, जसको छुट्टै बहस र विश्लेषण जरुरी छ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, पुस ४, २०७५, २१:१५:००